Ukuphupha Ubisi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ubisi yinto ebalulekileyo kweli lizwe. Unokuyisela ngokungacacanga, uyisebenzise kwiikeyiki, okanye uyonwabele ngohlobo lwebhotolo, itshizi, okanye iyogathi. Ukuzifumana, kuya kufuneka usenge ibhinqa. EJamani ezi ikakhulu ziinkomo, kodwa iibhokhwe neegusha ziyasengwa. EMongolia, ii-yaks zabasetyhini zisengwa ngobisi lwabo.
Kwixesha elidlulileyo, lalisengwa ngesandla, elalifuna ubuchule obuninzi, kuba kwakufuneka ulingise usana olusancancisayo ebeleni. Namhlanje ubisi lufunyanwa ngoomatshini bokusenga, olukhawulezayo nolunemveliso. "Owu ububhanxa!" Sisikhuzo esigcwele ukuphelelwa lithemba xa yonke into ibonakala ngathi iyelenqe ngokuchasene nawe.
Ukuphupha ngokusenga ngokungathandabuzekiyo ngamava angaqhelekanga, kuba mhlawumbi akukho namnye umntu ochukumise umbele wenkomo ebomini bokwenyani. Mhlawumbi igcwele kwaye ubisi luphantse ukuchitheka. Mhlawumbi ukuphupha nako kulwa ngokupheleleyo kulilize. Ezi kunye nezinye iinkcukacha zibalulekile ekutolikeni amaphupha.
1 Uphawu lwephupha «ukusenga» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukusenga» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukusenga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukusenga» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukusengela luphawu lwethamsanqa ekutolikeni amaphupha. Kuthetha ukuba zonke izinto ezenzeka ephupheni ziphantsi kwenkwenkwezi enethamsanqa. Nangona kunjalo, kufuneka anikezele ngezo zinokufumaneka kuye. mathuba kwaye uqaphele kwaye uwasebenzise amathuba. Abantu abatsha abanolwazi nabantu abazizityebi baya kunceda, nabo babhengeza ngesimboli sephupha "ukusenga."
Ukusenga isilwanyana ephupheni kukwakwingcaciso yamaphupha lo ndolozo. Lo mgangatho uluncedo ukuba awuguquki ukubawa okanye ukunyoluka. Umbele wesilwanyana, ke ngoko, kufuneka uqondwe njengophawu lokuba iphupha kufuneka labelane ngempumelelo yalo nabanye kwixa elizayo.
Kwitoliki yamaphupha, nangona kunjalo, uphawu lwephupha "ukusenga" nalo limela isilumkiso, oko kukuthi, xa iphupha lijonga abanye ngelixa lisenga. Ukusenga umntu, kulwimi lwethu, kukuthetha ukuze usebenzise umntu. Iphupha lilumkisa abo baphuphayo uphaphile kubantu abafuna ukukuhlutha izakhono zakho okanye izinto eziphathekayo.
Ngokwemigaqo yobungcali, ukusenga kungasetyenziselwa njengophawu lokuphupha ukutsala umdla kwinto yokuba kufuneka uqhubeke nokuthetha nomphathi wakho. Ukuba umntu ophuphayo usenga inkomo, uyavumelana nokutolikwa kwephupha. mpu melelo isigqibo.
Ukuba ubisi luphuma ngokoqobo emibeleni ephupheni, uphawu lwephupha luphawu lokuba iphupha liphose amathuba amahle. Ekugqibeleni, nangona kunjalo, yonke into izakulunga. Ukuba, ngaphandle kwawo wonke umzamo, ubisi aluhambi ngexesha lokusenga, iphupha lihlala linye. ukuqonda umgudu.
Uphawu lwephupha «ukusenga» - ukutolikwa kwengqondo
Isimboli yephupha "ukusenga" kukuchazwa kwengqondo ephupheni uphawu lokwoneliseka kwengqondo ngephupha kunye namandla alo. Suerte ukuziva kwaye wonwabe.
Kwakhona, i-subconscious inokusebenzisa eli phupha ukutsalela ingqalelo kwicala loyilo lobuntu. Ukuba umbele wesilwanyana unxulunyaniswa nesifuba sabasetyhini, uphawu lwephupha lunokuthi "lubisi" nakwabo bacinezelweyo. Shoot Iingoma. Ukutolikwa kwamaphupha, inkqubo yokusenga inokuba luphawu lomnqweno wesini ongazalisekanga wephupha.
Ukusenga inkomo okanye ibhokhwe kwenzelwe ukufikelela kubisi lwezilwanyana. Kwitoliki yamaphupha, olu phawu lwephupha lunokuba yimfuno yesondlo somoya ngengqondo yothando lomntu.
Iinkomo zobisi, ngakumbi inkomo, kubandakanya oku ekuchazeni amaphupha. Oomama kunye nesondlo esifunyanwa liphupha ngokwalo okanye esifunayo kwabanye abantu. Ukusenga kungangumqondiso ophuphiweyo ephupheni lomntu ukuze womelele kakhulu kwibhanti yoomama.
Uphawu lwephupha «ukusenga» - ukutolika kokomoya
Ukusengela luphawu lwephupha lokufumana kwinqanaba lokomoya. ukutya kokomoya. Ukuphupha kufuna amandla okomoya ekukhuleni kwengqondo. Ukutolikwa kwephupha lokomoya, inkomo imele ukuzala, kodwa nokuthatha inxaxheba ekungazini ngokudibeneyo.
Ukuba ibhokhwe iyasengwa ephupheni, uphawu lwephupha luphawu lokuba iphupha lifumene umlingani onomdla oza kulithatha kunye nalo ukufuna ngokomoya inokuxhasa.